Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex eMarcovnikova str. 10A - I-Airbnb
Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex eMarcovnikova str. 10A
Bendifuna ukunika iindwendwe zam le flethi okanye indlu ekwicomplex ekumgangatho ophezulu kunezo zikhoyo kwihotele yasekuhlaleni. Ukulungiswa kakuhle nefenitshala, kunye nazo zonke izinto ezifunekayo ukuze kuhlalwe kamnandi. Ukucoceka okungathethekiyo, okulungileyo, okulula, akukho nto ifunekayo kwaye yindawo efanelekileyo yokwakha okutsha embindini wesixeko kunye nendawo yaso ebiyelweyo, esoloko isimahla yokupaka imoto.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex enomgangatho wale mihla inokuhlala abantu abayi-5, enokuhlala kamnandi kwibhedi elala abantu ababini, isofa esongwayo kunye nebhedi enye esongwayo ye-Ikea. Ukuze iindwendwe zingasokoli, kukho i-WiFi enejubane eliphezulu kunye ne-TV.
Kukho iitawuli nezinto zebhedi i-Ikea, ikhitshi elinento yonke oyifunayo ukuze upheke, umatshini wokuhlamba impahla onepleyiti yokuhlamba, izinto zokuhlamba ( isepha, ishampu, i-shower gel), umatshini wokomisa iinwele, ibhodi yokuayinela, indawo yokomisa iimpahla neayini. Enye into engaqondakaliyo kukufumaneka kwewardrobe apho unokubeka ngokukhuselekileyo zonke izinto zakho, nto leyo ebaluleke kakhulu xa kuza kuhlalwa ixesha elide.
Zonke iindawo ezinkulu zokuthenga kunye nokuzonwabisa, ii-hypermarkets, iivenkile ezikumgama wokuhamba, iivenkile zokutyela kunye neekhefi, iikhemesti, icinema kwindawo yokuthenga yaseRoyal, iindawo zokumisa izithuthi zikawonkewonke zibekwe kufutshane nendlu.
Ifumaneka ukuze uncokole neendwendwe ngemiyalezo ekwiwebhusayithi ka-Airbnb, kwi-WhatsApp, kwi-Telegram, kwiifowuni nakwiifowuni
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Дзержинск